Degmada Shangaani oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Degmada Shangaani oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka
Degmada Shangaani oo u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka
Habeenka 16-aad tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka ee uu maamulka gobolka Benaadir taabagelinayo, waxaa ku tartamay degmooyinka Gaalkacyo oo ka tirsan gobolka Mudug iyo Shangaani oo ka tirsan gobolka Benaadir.
Tartamayaasha labada degmo qeybta hore waxaa la weydiiyey degma kasta afar su’aal, iyadoo kaddib qeybta nasashada lagu soo bandhigay warbixinnadii taariikhda labada degmo ka hadlayey, qeybta labaad ee tartan cilmiyeedka markii uu dhammaadey guddiga ayaa shaaciyey in labada degmo ay bar-bar dhac noqdeen oo ay la yimaadeen min Lix dhibcood, sidaa darteedna loo baahan yahay su’aallo dheeri ah, guddiga ayaa ku daray su’aallahaas.
Degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa la weydiiyey toddobo su’aal, waxa ay guud ahaan su’aallaha tantanka ka jawaabbeen saddex su’aal iyagoo helay Lix dhibcood (6 dhibcood).
Degmada Shangaani ee gobolka Benaadir, waxaa iyaguna la weydiiyey toddoba su’aal waxa ay si sax ah uga jawaabbeen su’aallaha guud ee tartanka afar su’aal, waxa ay heleen Siddeed dhibcood (8 dhibcood), degmada Shangaani ayaana u gudubtay wareegga saddexaad ee tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka ee bisha Ramadaan
Habeen dambe waxaa tartami doona degmooyinka Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag iyo degmada X/weyne oo ka tirsan gobolka Benaadir.
Previous articleWasaaradda Haweenka oo tababar la xiriira fahamka xaquuqda carruurta u qabatay qeybaha bulshada
Next articleMadaxweyne Farmaajo “Waxaa la burburiyay Saldhig ay maleeshiyada Al-Shabaab ku lahaayeen Saakow”